Ovy maizina amin'ny alika: antony | Alika Manerantany
Ovy maizina amin'ny alika
Araka ny fantatsika rehetra, ny alika dia biby fiompy sy sakaiza tena tsara, izay tsy vitan'ny hoe miaraka amintsika amin'ny fotoana filalaovana sy fialamboly, fa koa amin'ireo toe-javatra izay ahatsapantsika fa malahelo, mankaleo na mikorontana. Satria vonona hiaraka amintsika sy hikarakara antsika hatrany ny bibintsika, andraikitsika amin'ny fananana biby fiompy ny mitandrina ny fahasalamany ary miaro azy ireo amin'ny aretina na aretina amin'ny vatany ihany koa.
Izany no antony Hamoaka anao izahay amin'ny fisalasalanao rehetra izay misy ifandraisany amin'ny mony maintin'ny alikao, satria amin'ny alàlan'izany dia afaka mamantatra aretina isan-karazany ianao ary manampy amin'ny famaritana sy ny vahaolana amin'ny aretina.
1 Inona avy ireo aretina mifandray amin'ny mony mainty amin'ny alika?
2 Ahoana no ahalalanao fa misy alika moka ny alika?
3 Rahoviana ny alika no maizina?
4 Inona no mitranga rehefa miangona mavo be ny alika?
5 Inona no dikan'ny fisotrony mena?
Inona avy ireo aretina mifandray amin'ny mony mainty amin'ny alika?
Raha maizina ny urine dia mety famantarana izany vato voa na vato tatavia izay miforona rehefa mifangaro ny urine sy ny mineraly ao aminy ary tsy afaka manisy kristaly sy manamafy toy ny vato.
Amin'ny alàlan'ny urine dia afaka mamantatra cystitis isika ary amin'ny alalàn'ny kolontsaina ny fizahana, ary amin'ny alàlan'ny fisotrony dia afaka mamantatra hemorrhage amin'ny rafi-pivily isika, indraindray ny fisotrony dia mampiseho amintsika ny olan'ny prostaty amin'ny lahy na mandeha amin'ny fivaviana amin'ny vehivavy.
Azo fantarina koa izany hemolytic anemia rehefa masiaka mainty ny urine, satria manimba ny sela mena avy hatrany ity aretina ity, ka miteraka hemôglôbinin-kazo sy bile, dia azo tsapain-tanana izany, raha toa ka voan'ny tsiranoka ity aretina ity ary mety hahafaty.
Raha ny momba ny urine dia tsy maintsy jerentsika bebe kokoa ary raha mahita zavatra tsy mety isika dia mifandraisa mivantana amin'ilay mpitsabo biby. Afaka mamantatra ny sasany ihany koa isika olan'ny aty, raha misotro tafahoatra ny alikantsika ary manala ny urine bebe kokoa.
Raha ampidirintsika io ary mamoaka fofona mahery ny urine dia manamboatra làlana ho an'ny aretin'i tsy fahombiazan'ny aty. Isika tompon'alika dia tsy maintsy mahafantatra tsara ny fihetsika sy ny fisotron'ny biby fiompintsika, fa tsarovy fa tsy ny fisotrony ihany no afaka manome famantarana famantarana ny aretina
Ny aretina sasany voalaza etsy ambony dia tsy azo sakanana mora foana, fa raha tsy mitandrina ny biby fiompintsika isika amin'ny alàlan'ny fanaovana azy hihinana sakafo voalanjalanja, ento mandeha izy, milalao aminy ary misotro rano ampy, mieritreritra aho fa tsy hisy olana firy miaraka amin'ny aretina koa tadidio fa amin'ny maha olombelona ny alika dia tsy maintsy mitandrina toy izany koa, tsy maintsy misotro rano ampy izy io.
Ahoana no ahalalanao fa misy alika moka ny alika?
Tokony hitandrina ny fihetsika sy ny fisotrony isika, satria raha maizina be dia afaka miditra amin'ny fiandohan'ny aretina isika, fa raha manampy soritr'aretina toy izany tsy te hihinan-kanina, ny rotsaka fotsiny dia marary mafy, afaka nanamboatra lalana ho an'ilay aretina isika aretin-kibo fa izany dia antsoina matetika hoe cystitis.
Amin'ireny tranga ireny, toy ny amin'ny olon-dehibe ihany, dia feno bakteria maro ny tatavia ary noho izany dia hiseho mavo be rahona ary mihosin-dra mihitsy ny fisotrony. Ny fanadinana izay hataon'ilay manam-pahaizana amin'ny alàlan'ny tsipika na kolontsaina dia hamaritana raha misy ny aretina ary raha toa ka miteraka aretina ny aretina dia hanondro antibiotika ny mpitsabo biby.
Tsarovy fotsiny fa raha voatsabo haingana ny olana dia tsy ho sarotra izany, satria ny aretina dia mety hanimba ny taova hafa toy ny voa. Antony iray hafa mahatonga ny aretina ihany koa ny tsy fahampiana rano, zava-dehibe ny fisotroan'ny alikantsika rano madio sy madio be dia be mba tsy hiharan'izany aretina izany, hijerena ary hamarinina fa misotro rano ampy izy.
Rahoviana ny alika no maizina?
Mety misy tondro vitsivitsy izay mampitandrina antsika raha tsy salama tsara ny biby fiompintsika, toy ny rihitra misy rahona sy aizim-pito. Amin'ny alàlan'ny fisotrony dia manaisotra ny fako amin'ny vatana ny alika, noho izany ny lokony dia manome antsika ny fampahalalana ilaina momba ny fahasalaman'ny alikao. Raha maintso ny urine, ary misy fofona asidra mahery dia ilaina ny mitondra ny biby fiompinao haingana araka izay azo atao, satria mazàna ny urine dia tokony hanana loko mavo maivana ary tsy hifantoka be loatra.
Rehefa mavo maizina ny urine, mety ho mariky ny tsy fahampiana rano, noho izany dia mamporisika anao hihazona ny biby fiompinao hidiran'ny rano tsara. Ary koa, ny loko maizin'ny urine dia mety vokatry ny fahaverezan'ny electrolytes na tsiranoka amin'ny vatana izay mety hiteraka tsy fahombiazan'ny taova izay miseho miaraka amin'ireto soritr'aretina manaraka ireto: fahalainana, tsy fahazotoan-komana, vava maina, ary mony mainty misy fofona mahery.
Toy izany koa, ataovy ao an-tsaina fa ny lokon'ny urine dia mety ho mariky ny vato voa na vato ao anaty tatavia, izay miorina rehefa mifangaro ny urine ary ny mineraly ao aminy dia tsy afaka manjary mihamafy sy manamafy toy ny vato.
Inona no mitranga rehefa miangona mavo be ny alika?
Ara-dalàna raha tsy nandeha namindra nandritra ny fotoana ela ny alika, noho izany dia hivoaka mavo kokoa ny fisotrony satria mifantoka kokoa izy io, fa raha amin'ity tranga ity dia mivoaka mavo be ny urine, midika izany fa tsy maintsy raisintsika mihitsy izany ho an'ny vet.
Raha manampy an'io soritr'aretina io isika toy ny fanaintainana, tsy fahazotoan-komana, dia mety noho izany fahampian-drano, noho izany tena ilaina tokoa ny misotro alika be dia be ny alika mba ho ara-dalàna tanteraka ny fisotrony. Fa raha mahita zavatra tsy ara-dalàna hafa toy ny ra isika, toy ny loko urin hafa, dia tsy maintsy mankany amin'ny mpitsabo biby isika mba hahafahany mamantatra ny anton'izany ary hanome antsika fitsaboana vitsivitsy hanasitranana.
Inona no dikan'ny fisotrony mena?
Rehefa voan'ny aretina ianao, dia mety mivoaka marihitra kely ny rà, fa raha mena mena na mavokely kosa ny urine dia miatrika ny fisehoan'ny hematuria isika ary izany dia mety vokatry ny zavatra matotra toy ny mandeha ra ao amin'ny urinary system.
Raha izany no mitranga, ny alikantsika mila fitsaboana ara-pitsaboana eo noho eo ianaoSatria tsy maintsy faritana ny antony mahatonga ny rà mandriaka ka azo apetraka ny fitsaboana, amin'ny tranga sasany amin'ny vehivavy mena ny vehivavy dia mety hidika koa ny fandehanan'ny fivaviana ary mety hanadino ny fisotrony izany.
Aza adino izany Andraikitsika ny mandray biby fiompy, satria efa ho ampahany amin'ny fianakavianay io, dia ho iray hafa toa ny zanakay lahy izany, ka mila fitandremana sy fikarakarana izy ireo, fanaraha-maso aretina sasany, fa ambonin'izany rehetra izany dia manome fitiavana be dia be ho azy ireo.
Rehefa marary izy ireo dia andramo alao fo izy ireo, satria mino izany na tsia, ny alika koa dia mahatsapa fitiavana, fanamavoana, fahatezerana, fahatezerana ary miasa ara-tsaina, noho izany dia ampirisihina hitondra azy ireo toy ny zaza hafa. Tokony ho mailo be isika amin'ny zavatra rehetra mahakasika ny biby fiompintsika, mba tsy ho sarotra ny aretina ary mety hamoy ny alikanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ovy maizina amin'ny alika
Fiadiana amin'ny alika tsara indrindra: torolàlana momba ny fividianana
Ahoana ny fomba hanomezana alika tsindrona subcutaneaux